Mfe Nyefee video site na kọmputa na-iPad-
> Resource> iPad> otú nyefee Video site na kọmputa na-iPad
Chọrọ nyefee vidiyo si na kọmputa na-iPad enweghị erasing ndị ọzọ vidiyo na iPad, ma amaghị otú? Ọ bụrụ na ị chọọ ihe ngwọta enweghị ihe ọ bụla n'ihi maka afọ, ugbu a, ị dị nnọọ ịkwụsị ịbụ nkụda mmụọ. Ebe a, ga-amasị m ike ikwu na ị Wondershare TunesGo ma ọ bụ Wonershare TunesGo (Mac). Ọ na-ahapụ ị nyefee vidiyo si na kọmputa na-iPas enweghị adịkwa ọ bụla mbụ video on iPad. Na Ọzọkwa, ọ bụrụ na video ị na-ebufe ka iPad bụghị iPad enyi na enyi format, ọ ga-tọghata video ka iPad akwado usoro maka gị. Ọ bụ ike ma dị mfe na-eji. Dị ke 2 nzọụkwụ, ị ga-ọma idetuo vidiyo si na kọmputa na-iPad.
Gbalịa Wondershare TunesGo iji strimụ vidiyo si na kọmputa na-iPad! Ọ bụrụ na ị nwere Mac kọmputa, biko gbalịa Wondershare TunesGo (Mac).
2 nzọụkwụ idetuo video site na kọmputa na-iPad
Step1: Ẹkedori a usoro na jikọọ na gị iPad na ya
Download na wụnye Wondershare TunesGo na kọmputa gị. Ọ bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na kọmputa na-agba ọsọ na Windows 8, Windows 7, Windows XP na Windows Vista. N'ụzọ bụ isi, ẹkedori TunesGo na jikọọ na gị iPad na kọmputa site na eriri USB. Nke a na usoro ga-chọpụta gị iPad ozugbo mgbe ọ na-ejikọrọ.
Cheta na: Jide n'aka na ị rụnyere iTunes na kọmputa gị. TunesGo na-arụ ọrụ mgbe iTunes arụnyere.
Step2: Bugharịa video site na kọmputa na-iPad
Mgbe ahụ, na-ekpe ndekọ osisi, pịa bọtịnụ "Media" iji bugote media window. N'ụzọ doro anya, e nwere a top akara ke media window. Pịa "Movies" na n'elu nke window. Mgbe ahụ, na fim management window, pịa bọtịnụ "Tinye" mbubata vidiyo si na kọmputa gị iji iPad.
Cheta na: TunesGo bụ n'ụzọ zuru ezu dakọtara na niile iPad ụdị na-agba ọsọ iOS 9, iOS 8, ​​iOS 7, iOS 6 na iOS 5, gụnyere iPad Obere, iPad Air, iPad na Retina ngosi na iPad 2.
Na dị nnọọ sekọnd, ị ga-ahụ gị chọrọ videos na iPad. Nke a bụ otú nyefee video site na kọmputa na-iPad. Ọ bụ nnọọ mfe, nri? E wezụga na, na Wondershare TunesGo, ị nwere ike nyefee vidiyo si na iPad ka PC dị ka mma. Nwere fun na gị iPad!
Gbalịa Wondershare TunesGo idetuo vidiyo si na kọmputa na-iPad ugbu a!